Ama-Biofertilizers ngokumelene nokuwohloka kwenhlabathi | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | 17/05/2022 19:25 | Imvelo
Ezolimo ziye zandisa ukusetshenziswa kukamanyolo wamakhemikhali eminyakeni edlule ukuze kuhlangatshezwane nesidingo esinamandla sokudla kwabantu. Inkinga ngala manyolo amakhemikhali wukuwohloka kwenhlabathi okuwumphumela. Ukuze kuncishiswe lezi zinkinga, i- ama-biofertilizer. Lawa ma-biofertilizer azama ukunciphisa umthelela wemvelo wezolimo, ukugwema ukuwohloka kwenhlabathi nokwenza ngcono izinga lawo.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi ama-biofertilizers asetshenziswa kanjani ngokumelene nokuwohloka kwenhlabathi nokuthi yiziphi izinzuzo anazo kunezomdabu.
1 Ama-Biofertilizer ngokumelene nokuwohloka kwenhlabathi
2 Ama-microorganisms we-Biofertilizer
3 Izinzuzo ze-biofertilizer
4 Umehluko omkhulu
Ukucekelwa phansi komhlaba kuyinkinga enkulu futhi ekhulayo ebangelwa ukusetshenziswa kabusha, ukuphathwa kabi kanye nokuxhashazwa okungenangqondo kwemithombo yemvelo. Kulinganiselwa ukuthi ngaphezu kwama-70% enhlabathi yezwe yonakele ngokomzimba, ngamakhemikhali noma ngokwezinto eziphilayo Ngenxa yokuqina kwezolimo, ukusetshenziswa kabi kwezinto zokulima, ukususwa kwezinsalela zezitshalo kanye nokungabikho komanyolo wemvelo, umhlabathi wawo uwohloka usuku nosuku.
Izinkinga eziyinhloko ekucekeleni phansi kwalo mthombo wemvelo zihlobene nokuguguleka, ukufakwa kukasawoti emanzini kanye nokunciphisa amasheya aphilayo, kanye ukuminyana okubangelwa ukugqwala ngokweqile kwemishini yezolimo. Lokhu kusho inkinga yokuwohloka komzimba. Izinhlelo zokukhiqiza ezolimo zinemithelela ebalulekile endaweni ezungezile, imisebenzi kanye nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo zomhlabathi. Ukuphazamiseka nokusetshenziswa kwezinto zokulima kuye kwanciphisa kakhulu inani nenani lezinhlobo zezinto eziphilayo ezihlala lapho.
Ngemuva koshintsho ekusetshenzisweni komhlaba kuzinhlelo zemvelo zasemhlabeni, inani lezinhlobo zezitshalo liyancipha kakhulu kanye nenani nekhwalithi yemithombo yazo iyahlukahluka ngezinhlelo zezimpande ezihlukene. Lokhu kubangela ukuncipha kokuqukethwe kwento ephilayo enhlabathini, okubuye kukhawulele ukuhlukahluka kwezinhlobonhlobo zenhlabathi kanye nokutholakala kokudla.
Ngokusekelwe kulokhu okungenhla, kunesidingo sokuthuthukisa ubuchwepheshe obungakhuphula izindawo ezigcina umhlabathi, konga umswakama wenhlabathi, kuthuthukise ukusebenza kahle kokusetshenziswa kukamanyolo, futhi kunciphise ukungcoliswa komhlabathi namanzi. Kuye kwenziwa ucwaningo oluningi ngokusetshenziswa kwama-biofertilizers njengendlela yokuthuthukisa izimo zenhlabathi nokwandisa isivuno. Sekuphethe ngokuthi ukusetshenziswa kwe Umanyolo we-organic kuhle kakhulu ngcono izimo zomhlabathi uma kubhekwa inani lama-microorganisms abanawo.
Ama-Microorganisms anezinhlobonhlobo zezindlela lokho ukuthuthukisa ukukhula kwezitshalo ngokusebenzisa i-rhizosphere symbiosis, okubaluleke kakhulu yilezi: ukusetshenziswa okwandisiwe kwezakhamzimba namanzi, ukwethulwa kwe-nitrogen esimisweni senhlabathi yezitshalo nge-biofixation ngamabhaktheriya ohlobo lwe-Rhizobium, njll.
Lawa ma-biofertilizers athola amandla ngaphezu kukamanyolo ojwayelekile njengoba imithelela yezemvelo inciphile kakhulu. Ngenxa yokusetshenziswa kwama-microorganisms akwazi ukwenza ngcono izimo zenhlabathi kanye nekhwalithi yawo, kungenzeka ukuthola ukuthuthukiswa kwesivuno sezitshalo ngaphandle kwesidingo sokulimaza inhlabathi.
Izinzuzo eziyinhloko ezinikezwa ama-biofertilizer yilezi:
Yehlisa ukusetshenziswa komanyolo wamakhemikhali. Njengenye indlela kumanyolo wamakhemikhali, ama-biofertilizers anomthelela omuhle emvelweni ngokunciphisa ukusetshenziswa kwe-ammonia ekukhiqizeni umanyolo wamakhemikhali, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla emhlabeni jikelele.
Ukuthuthukiswa kwezitshalo nokunakekelwa kwenhlabathi. Ukusetshenziswa kwalezi zinambuzane kuthanda ukuvunda komhlaba nezitshalo, kuvimbela ukuguguleka futhi kuthanda ukwakheka kwenhlabathi okufanele.
Thuthukisa umthamo womsoco wezitshalo. Ukusetshenziswa kwalolu hlobo lomanyolo we-organic kungakhuphula ukumuncwa kwezakhi zezitshalo, njenge-nitrogen, i-zinc noma i-phosphorus.
Bavumela ukusetshenziswa kwemfucuza yemvelo.
Isivuno sikhuphuka ngo-30%. Ukunakekelwa kwenhlabathi okwenziwe ngcono kusiza izitshalo ukuthi zikhule kangcono ngesikhathi esomile.
Abalimi abaningi abaqapheli izici zokuvuselela ama-biofertilizer uma kuqhathaniswa namakhemikhali, ukudala izinganekwane ezingamanga nokuphika ukusetshenziswa kwazo. Umanyolo wendabuko wengeza amakhemikhali endaweni ezungezile, njengezinsimbi ezinzima ezitholakala ekubunjweni kwazo. Ngokolunye uhlangothi, ukusetshenziswa okunengqondo kwama-biofertilizer akunawo umthelela omubi endaweni ezungezile ngoba ukwakheka kwayo akuqukethe izakhi eziyingozi.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwama-biofertilizers kuthanda isenzo se-antiparasite futhi kwandisa noma kuvikela izitshalo ezinambuzaneni. Ngakolunye uhlangothi, umanyolo wamakhemikhali unomthelela ekwenzeni ugwadule futhi ungabangela ukulahlekelwa umhlabathi cishe unomphela. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwama-biofertilizers kusiza ekuvuseleleni umhlabathi nezitshalo, lapho izinto eziphilayo kanye nama-microorganisms angalungisa umsoco futhi athuthukise isakhiwo senhlabathi.
Ngethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokusetshenziswa kwama-biofertilizers ngokumelene nokuwohloka kwenhlabathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Imvelo » Ama-Biofertilizer ngokumelene nokuwohloka kwenhlabathi